Ogaysiis Muhiim ah iyo Wargelin Mudaaharaad.
Mohamoud Ibrahim Jama (Haji)
Salaamu caleeykum Dhamman walaalaha soomaalieed Meelaad joogtaanba.
Walaalayaal sidaad la socotaanba waxa beryahan boggaga wararaka Soomaalida ku soo baxayey warar sheegaya inuu Waddankan Ingiriiska uu booqasho ku imaanayo ninka isku sheega inuu madaxkayahay Qayb kamid ah gobollada waqooyiga Soomaaliya haddaba waxa iswaydiin mudan ujeddada ka ka danbaysa socdalkani.
Sida aan xogogaalsaday badankiinuna aad ka warqabtaan ujeedadau waa fikrad ay wataan dad dano gaar ah lihi oo ay ugu horreeyaan madaxkusheega maamulka gobolada waqooyiga qaar ka tirsani, inkastoo dadka soomaaliyeed ee gobolladaasi ku dhaqan badidoodu kasoo horjeedaan kala qaybinta ummada Soomaaliyeed.
Waxa kale oo kooxdaasi kala shaqaynaya koox kale oo baarlamaanka ingiriiska ka tirsani jagooyinse aan xil ka hayn maamulka dawladda, waa qolyihii dhowaan socdaalka ku tegey Hargeysa, Nimankani MP-yada ahi waa niman lagu yaqaanno CUNSURIYADDA ku salaysan dadka soo baro kacay ee magangelyo doonka ah ee Soomaalidu ka mid tahay. Waxa kaloo nimankaa intaa usii dheerdano dhaqaale oo ay kula heshiiyeen maamulkusheega Hargeysa.
Haddaynu soo qaadanno arrinta xagga Cunsuriyadda/Faquuqa . Sida aad lawada socotaan dhammantiin waxa beryahan danbe waddamada reer Galbeedka kusoo batay nicitaanka dadka magangelyodoonka ah ee soo baro kacay gaar ahaanna waddankan Ingiriiska in dad waynihii iyo siyaasiyintii kacabanayaan dadka kusoo fatahay ee dhaxalsiiyey xataa in shaqooyinkii ku yaraadeen dadkii waddanka udhashy, teeda kale dadka Qaxootiga ah lagu biilo cashuurtii dadka waddaniga ah laga qaaday taasoo keentay in siyaasi waliba isku dayo inuu kusoo baxo oo jaranjaro siyaasadeed ka dhigto si uusan kursigiisa uwaayin, waxa la ansixiyey in sharciga loo diido dadka magangeelyo doonka ah laguna celiyo waddankay ka yimaaddeen.. Haddaba waxa adkaatay sidii loo celinlahaa dadka Soomaaliya kayimid maaddaama Soomaaliya aanay dawladi kajirin la’aqoonsanyahay, kooxdan Mp-yada ahi waxay la kulmeen koox goonni goosato ah oo Soomaali ah oo had iyo jeer utaagan waxyeelada iyo hagardaamada ummada Soomaaliyeed oo ku gabbanaya magic Qabiil iyo Gobolaysi, kulankaasi oo ka dhacay Koonfur-Galbeed London (London Southwest). Waxa laysku afgartay in layskaashado qoloba qolada kale Sallaan/Jaranjaro ka dhigato (Mutual Interest).
Waxa heshiiskaasi ahaa Hargeysa taga MP-yadoow kana soo warbixiya been iyo runba isku dayoo sidaad dawladda ingiriiska uga dhaadhicin lahydeen inay halkaasi nabad tahay Dimoqraadiyadi kajirto nabadgelyona ka jirto dadka Soomaaliyeed ee halkaasi degganina uqalmaan inay goonni isu taagaan Soomaalida kalena ay dadkan hore uwaxyeelleeyeen kala isirna yihiin.
Qolyihii MP-yada ahaana waxay yidhaahdeen annagaa arrintaasi samaynaynee manoo oggolaanaysaan inaannu Qaxootiga Soomaaliyeed oo aannu halkaa kucelinno wixii sharciga loo diiday ( Sida aad la socottaana Soomaalidii waddankan soo gashay sannad iyo badhkii ugu danbeeyey wax sharci la siiyey in ka yar 5%, 95%-gii kalena waa la diiday waxayna sugayaan dib ucelin DEPORTATION)
Qolyihii Baarlamaanka Ingiriiska ka tirsanaa waxay oggolaansho arrintani kasoo qaateen maamulka hargaysa halkan markay kusoo noqdeenna Baarlamaanka ayaay soo hordhigeen in arrinkani laga doodo Feb 2004, waxayna booqasho inuu halkani ku yimaaddo udiyaarsheen Maamulkusheegga Soomaalidiidka Hargaysa, waxaa laysla afgartay haadii aqoonsi raadintu usoconwaydo in lagu siiyo lacag celinta dadkaasi qaxootiga ah ee Soomaaliyeed xerona looga oodo Galbeedka Hargaysa dabadeedna lacagtaa laqaybsado.
Haddaan intaasi kaga baxo arrinta ka danbaysa booqashada Goonnigoosatada Soomaalidiidka Hargaysa waa kuwee kuwa horkacayaa Goonni goosatadu?
Axmed Maxammed Adan (Qaybe) waa wasiirkii ugu danbeeyey ee Arrimaha debedda Soomaaliya! Waa ninkii soo kireeyey diyaaradihii lasheegay in lagu duqeeyey Hargaysa iyo nawaaxigeeda ee laga keenay South Africa. Markuu Qaybe hargaysa ku laabtayna waa ninkii soo qufayey xabalihii lasheegay inay ahaayeen maydadkii dadkii Diyaaraduhu Duqeeyeen kuna baroortay. Waxase layaab noqotay meeshii layslahaa maxkamad caalamiya haloo diyaariyo waxa abaalmarin loo siiyey inuu noqdo Guddoomiyaha Baarlamaanka Hargaysa CAJABAN!!!!!
Ina Ismaaciil Jirde waa Sameecaddi iyo Microphone-kii Maxammed Siyaad Alle ha’unaxariistee waa ninkii Codka ukeeni jirey kana qaadijirey baahinna jirey markuu hargaysa dib ugu noqday maxaa lagu abaalmariyey? BAL ADBA!!!!!!!!!!!!!!!!!
Daahir Riyoole wa Taliyihii nabadsugidda Gobolka Sool muddadii dagaalka sokeeye waa ninkii soo qaqabanjirey xidhina jirey dadka Somaaliyeed ee asalkoodu Isaaqa yahay kuna samaynjirey jidhdilka iyo handadaada taasoo sababtay dadkii kudhashay Laascaanood ee Asalkoodu Isaaqa ahaa inay markii danbe isaga daraaddii uqaxaan qaarkii kalena uu sirdoonkiisu soo qabqabtay ilaa iyo haddana reero dhan la layahay meel ay jaan iyo cidhibba dhigeen. 1999kii Riyaale waxa loo beddelay Taliyaha nabadsugidda Berbera waana ninkii sababay xasuuqii dad lagu qiyaasay 5000 oo qof oo Isaaqa sida uu sannadkii tegay xilligii doorasho kusheegga hargaysa ka caddeeyey Muuse Biixi oo Riyoole ku dacweeynayey xasuuqaasi. Sida aad la socotaana markii Dawladdii Siyaad madaxda ka ahaa burburtay Riyaale Berbera wuu kasoo qaxay Boorame oo udahashayna oo udhoweydna muu aadin waayo wuxuu ka baqayey Jabhaddii waqooyiga soo gashay inay dilaan illeeyn far iyo meel bugtaa is oge wuxuu magangelyo isaga dhiibayLaascaanood! Riyaale abaal marintiisii maxay noqotay in loo doorto madaxa Goonnigoosatada Soomaalidiidka Hargaysa CAJABANNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!
Waxase intaasi oo dhan kasii daran muxuu sameeyey markii hargeysa loo doortay?
Wuxuu sameeyey inuu dadkii Soomaaliyeed ee aan udhalan Gobolladaasi inuu masafuris /Tagxeel kusoo rogo oo laraafo taaso keentay gadhi waday 39 qof oo Soomaali ah oo asalkoodu ahaa Reer muqdishu iyo baydhabo oo hargaysa laga soo raafay inuu ku guddoomo Laascaanod iyo garoowe dhexdooda halkaasna ay ku nafwaayaan dhammaantood Mucjisooooooooooo!
In loo diido Seminaar Hay’ado Caalimi ahi wadaan macallimin ka timid Boosaaso oo Hargaysa lagasoo celiyey Kadarannnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!
In dib loo soo celiyo koox ciyaartooy ah oo ka tegey Xamar Hargaysana utegey Ciyaaro ma’oga miyaa Sportisku inuu ka madax bannan yahay Qabiilka iwm Badooooooooooooooooww!!!!!!!!
In laga masaafuriyo dadka Soomaliyeed ee Ogaden iyo Soomaaligalbeed ka yimaada loolana dhaqmo si waxashnimo ah oo bani aadamnimada kabaxsan Qaarna Xuduudda Ethiopia lagu daadiyo qaarna Amxaaro gacanta loo geliyo Cadooooooooooowwwwwwwwwwwwww!!!!
In baabuur hayadeed oo ay qafaasheen dad udhashay reer hargaysa loo xidho lix dhallinyaro ah oo reer Muqdisho ah ilaa iyo haddana ay xabsi kujiraan Fulayyyyyy!!!!!!!!
In nin dadka dhaqanka xun (reer qawmu Luud) oo Gaal Swiss ah dilkiisi loo xidho saddex dhallinyaro ah oo asalkoodu reer Muqdisho ahaa Qoodh iyo Xero Laaweeeeeeeeeeee!!!!!!!!
Riyaale waa ninka xabsi ku riday BOQORKII NABADDA BOQOR BURMADOOW kagana yimid xabsiga gudihiisa halka uu isagu dalxiiska ku marayo Yurub, waxa taa kadaran inuu Riyaale diiday inuu la hadlo iska daayee inuu la kulmo Dhammaan Madaxdhaqameedyadii Reer Togdheer ee rabay inay kala hadlaan soo daynta Boqorka wuxuu kaloo diiday in lasoo booqdo boqorka, intaana kagama hadhin Riyaalee wuxuu sameeyey inuu sirdoonkiisa iyo maleeshiyadiisa udiro Degaankii Boqorku ka yimid si’ay falal Argagagixiso uga fuliyaan waxayna halkaasi ku dileen 3 qof oo ka tirsan ehelkii Boqorka iyo Taageerayaashiisii wuxuna ku dhaawacay 6 qof oo kale welina waxa dulfadhiya Beeshii BOQORKA maleeshiyadii Riyaale DHAQANLAAWEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!
In in in in in in ------------- miyaan soo koobi karaa----------------
Haddaba Akhristoow waxa xusid mudan dadkii walaalaha Soomaaliyeed ee Gobannimada iyo Midnimada Dhiiggooda udaadiyey (bal fiiri hooyada soomaaliyeed oo iyadoo Sagaal bilood ah xabsiga ugashay Midnimo iyo gobbannimo soomaaliyeed ka eeg Somaliweyn.com) ee 1960-kii ku hadaaqayey
Soomalidi Midoowday Saxalkii Baxyoo samaatay------ Saddaexdii maqnaana waysoo socdaane (Jabuuti, Reserve Area iyo NFD) iyagoo weli nool saw nasiib darro ma’aha ina maanta Dhegahoodu maqlaan
Soomaalidi beloowday Saxalkii helyoo Sumoowday -------- labadii sinaadaa sii kala ordaayee!!!!!!!!!!
Iyado anan hal maqaal ku soo koobi Karin dhacdooyinka Taariikheed waxa xusid mudan daweynaha Soomaaliyeed Gaar ahaan dadka deggan waddanka Ingiriiska in loo diyaar garoobo sidaynu ubeenayn lahayn Riyada Taliska Goonni Goosatada Soomaalidiidka Hargaysa ka taliya ogaadana waxa lagu muddaharaadayaa waa Maamulkee dadka reer waqooyiga ahi badankoodu wayka qaybqaadanayaan bannaan baxaa waayo waa dad Soomaaliyeed oon diyaar u’ahayn kala go’a Soomaaliweyn. waxa laydinaka Codsanayaa in codkiinna iyo Muuqaalkiinaba ku taageertaan Bannaanbixii ugu waynaa ee Taariikhda Soomaliyeed oo lagu wado Asbuucan dabayaaqadiisa inuu ka dhaco Magaaladan London gaar ahaan Whitehall iyo Parliament Square waxaad la imaan kartaan carrurtiina iyadoo ammaanka aad loo adkeeyey si,ay ubadkiinna ugu noqoto Maalin Taariikheed oo ugasha Diiwaanka Xusuusta halkaasoo ay imanayan Journalist caalami ah dad ka socda Television-ka iyo weliba dhammaan saxaafadda Soomaliyeed qofkii xusuus gaara raboowna soo Qaado Camera aad ku duubato Xusuustaa Qaaliga ah.
Waxa lagusoo bandhigayaa Maalinta iyo Saacadda boggaga Internet-ka Soomaaliyeed .
Waxaan hadalkii kusoo laayey.
Qurbojooggoow ogaysiis Qarankaynu lahaynbaa
Qabri loo qodayaayoo kala qaybin utaagane
Qaybe Dheere raggiisiyo Qalfoofkii ina Sheekh madar iyo
Jirdihii qallallaa iyo Riyoolaa Qasirayee
Qasaare weeye midoobiyo Qaaxo weeye lammanoo
Qabri aan waxba deeqin iyo Qaaqlayaal is kubiiray
Waa qushaashka Amxaarkiyo Qadaadweynta sawaaxili
Dar ay qoys wadaagaanoo Uqadhaaba gumaysiga
Qurbo joggoow ogaysiis Ka xorooba Qabiilkoo
Qarankaa ka muhiimee Qaylo dhaantaa dharaartiyo
Kaqaybqaado banaanbaxoo Qofna yaanu maqnaanoo